Shir ballaaran oo ku saabsan taabagalinta dimuqraaddiyadda Puntland oo Garowe ka furmay. – Radio Daljir
Shir ballaaran oo ku saabsan taabagalinta dimuqraaddiyadda Puntland oo Garowe ka furmay.
Janaayo 25, 2012 12:00 b 0
Garowe, Janu, 24 ? Shir ballaaran oo ku saabsan habka dawladda Puntland ugu hayaami-karto tubta dimuqraaddiyadda ayaa maantay ka furmay magaalada Garowe, kaasi oo ay soo qaban-qaabisay dalada ay ku midaysanyihiin dhammaan ururada aan dawliga ahayn ee loo soo gaabiyo ?PUNSAA?.
Shirka oo socon-doono muddo 2 maal-mood ah ayaa lagu casumay ergooyin ka socday gobollada Sool iyo Nugaal, kuwaasoo fahan-buuxa laga siinayay dimuqraaddiyaddu waxay-tahay iyo habka bulshada loo gaarsiin-karo baahinta xukunka.
Kulanka ayaa intii uu socday waxaa ka hadlay madax-badan oo ka kala-socday hay?addaha dawladda, iyadoo halkaasi uu ka hadlay wasiiru-dawlaha dastuurka iyo arrimaha federaalka Puntland Cabdi Xassan Jimcaale oo sheegay inay mar-xalado kale duwan ay soo martay taabagalinta dimuqraaddiyadda Puntland, balse muddooyinkaan-dambe ay bulshada Puntland fahan-fiican ay ka haystaan wadada loo hayaamayo ee nidaamka asxaabta badan.
Shirkaan ayaa daba-socda shirar hore oo lagu qabtay magaalooyinka Gaalkacyo, Qardho, iyo Boossaaso, kuwaasoo dhammaantood bulshada lagu fahan-siinayay micnaha iyo miisaanka dimuqraaddiyadda iyo sida uu dastuurka Puntland u waafaq-sanyahay shareecada islaamka.
Ciidamada dawladda federaalka, Ahlu sunnah iyo Al-Shabaab oo dagaal ku dhex maray degmada Luuq.
Wasiiro Somaliland ah oo gaaray Badhan, iyo cuqaasha Sanaag oo socdaalkaasi ku tilmaamay faragalin qaawan.